नाका क्षेत्रका नागरिकलाई आफ्नै भूमिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम अघि बढाएका छौं | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / नाका क्षेत्रका नागरिकलाई आफ्नै भूमिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम अघि बढाएका छौं
नाका क्षेत्रका नागरिकलाई आफ्नै भूमिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम अघि बढाएका छौं
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता January 2, 2019	0 135 Views
अध्यक्ष– राजपुर गाउपालिका, दाङ
राजपुर गाउपालिका भूगो लको हिसाबले जिल्लाको सबै भन्दा ठूलो गाउपालिका हो  । भौ गो लिक विकटता उत्तिकै छ ।
राजपुर गाउपालिकाको से वा लिन नाका क्षे त्रमा बसो वास गर्ने नागरिकले भारतीय बाटो प्रयो ग गरे र गाउपालिका आउनुपर्ने बाध्यता छ ।
राजपुर गाउपालिकालाई नाका क्षे त्र र त्यहा बसो वास गर्ने नागरिकलाई समृद्ध बनाउने गरी सडक सञ्जालबाट नाका क्षे त्रलाई
गाउ“पालिकाको के न्द्रसग जो ड्ने गरी सडकका यो जनाहरु प्राथमिकताका साथ अगाडि सारिएको े छ । राजपुर गाउपालिकाका गौ रवका यो जनाहरु के हुन् भन्ने विषयमा युगबो धकर्मी दशरथ घिमिरेले राजपुर गाउपालिकाका अध्यक्ष लो कराज के सीसग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक
राजपुर गाउपालिकाको प्राथमिकता के हो ?
यो वर्ष हामीहरुले राजपुर गाउ“पालिकाको तर्फबाट गत वर्ष जति पनि अधुरा यो जनाहरु थिए, जस् तो नाका जो ड्ने सडकको
ट्याक खो ले का थियौ ं । त्यो बाटो वर्षा मासमा आवतजावत गर्न कठिनाइ भएको हुनाले अब त्यसलाई स् तरबृद्धि गर्ने , पक्की संरचना बनाउने  । कजवे हरु भए, पक्की नालाहरु भए, ग्याविन वालहरु भए, ह्युमपाइपहरु बिछ्याउने काम गर्न थाले का छौ ं । सधै भरी सडक सञ्चालन हुने गरी जाओ स भन्ने किसिमले त्यसमा लागे का छौ ं । गत वर्ष हामीहरुले हरे क ठाउ“मा विद्युतका पो लहरु गाडे का थियौ ं । पो लहरु गाडे को ठाउ“मा अहिले तार टा“गे र ट्रान्सफर्मर जो डे र त्यो ठाउमा विद्युत सुचारु गर्ने लक्ष छ । गत वर्ष कृषि क्षे त्रमा सिंचाईको लागि डिप बो रिङहरु गाडिएका थिए । ती ठाउ“मा विद्युत नभएर, मो टर नभएर त्यत्तिकै गाडे को मात्रै छ । त्यसकारणले ती संरचना पनि सञ्चालन गर्ने गरी विद्युतका पो ल, तार, ट्रान्सफर्मर नपुगे को ठाउमा ट्रान्सफर्मर, मो टर जडान गरे र सिंचाईको लागि पानी सुविधा उपलब्ध गराउने यो जना छ । धे रै जसो गत वर्षका यो जनाहरु सम्पन्न भइसके पनि कार्यान्वयन भएका छै नन् । ती यो जनाहरुलाई सुचारु गर्ने पक्षमा हामी छौ ं ।
जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा परिवर्तन के आयो ?
हामीले गत वर्ष राजपुर गाउ“पालिकालाई पहिलो प्राथमिकता बाटो लाई नै दियौ ं । किनभने दाङ जिल्लाकै ठूलो गाउ“पालिका पनि र विकटता पनि त्यत्तिकै भएको हुनाले प्रत्ये क गाउलाई सडकस“ग जो ड्ने यो जना हो  । राजपुर गाउ“पालिकाको भौ गो लिक अवस् थाको बारे मा सबै लाई थाहा छ । दे उखुरी उपत्यका एउटा छ । बीचमा खो लाहरु छन् । गुरुङखो लादे खि रसरी, माररी, गंगदीसहित थुप्रै खो लाहरु छन् । त्यस पछाडि चुरे को पारि बो र्डरहरुमा नाकाहरु छन् । यसरी तीन किसिमका वस् ती छन् । यिनीहरु एक आपसमा बाटो बाट जो डिएका छै नन् । नाकाका मानिहरु आवत जावत गर्न दिनभरि लाग्छ । भारतका बजारहरुमा गएर आफ्ना आवश्यकताका सामग्रीहरु किन्ने गर्छन् ।
यिनीहरुलाई पहिलो कुरो दे उखुरीसग, गाउपालिकाको के न्द्रस“ग जो ड्ने हाम्रो चाहना हो  । त्यसकारण गत वर्ष हामीले बाटो मा, नाकादे खि
नाका जो ड्ने बाटो , दे उखुरीदे खि नाका जो ड्ने बाटो , त्यस्तै खो लादे खि खो ला जो ड्ने बाटो , बाटो नपुगे का गाउ“हरुमा बाटो पु¥याउने भने र बाटो मै पहिलो प्राथमिकता दिएका हौ ं । त्यस पछाडि सिंहदरबारको अधिकार जम्मै गाउपालिकामा आएको भन्ने भनाई पनि आएको । त्यसको साथसाथै जनतामा यति इच्छा आकांक्षा बढ्यो कि यही वर्ष नै के –के नै हुन्छ भने र धे रै यो जनाहर माग हुन थाले  । अनि पहिलो वर्ष भएको हुनाले त्यति अनुभव पनि थिएन । यो जनाहरु पनि साना–साना टुक्रे यो जनाहरुमा बजे ट दिइयो  । त्यो गर्दाखे री अधुरा यो जना धे रै भए । अघि मै ले भन्या जस् तै सञ्चालनमा आउन सके नन् धे रै  । शुरुवात भयो तर, सञ्चालनमा आउन सके नन् । त्यस कारणले हाम्ले गत वर्षबाट के अनुभव ग¥यौ ं भने अहिले यदि यो जना राख्ने हो भने टुक्रे यो जना भन्दा जहा“ आवश्यकता छ, नभई नहुने अवस् था छ त्यहा“ साना यो जना राख्ने  । नत्र भने ठूला यो जनाहरु राख्ने  । गत वर्षको यो जनालाई पूर्णता दियो भने पछि बल्ल हाम्रो विकासको काम अघि बढ्छ । दिगो हुन्छ । जनताले यसलाई उपभो ग गर्न सक्छन् । पो ल मात्रै गाडे र, पाइप मात्रै गाडे र, बाटो मात्रै बनाएर विकास दिगो हुन सक्दै न । बाटो पहिरो ले पुरिदिने , पो लबाट विजुली नआउने , पाइपबाट पानी नआउने हो भने त्यो के ही उपलब्धि हु“दै न । त्यसकारणले यसलाई निरन्तरता दिउ“ । गत वर्ष भएको काम पूरा गरौ ं र यो वर्ष चाहि फे रि नया आवश्यक जुन कामहरु छन् तिनलाई अगाडि बढाऔ ं भन्ने हिसावले गत वर्षको अनुभवबाट सिक्दै यो वर्ष त्यसरी अगाडि बढिरहे का छौ ं ।
राजपुरलाई चिनाउने गौ रवका यो जना के हुन् ?
नाकामा बसो वास गर्ने नागरिकहरुलाई सुविधा अन्तर्गत बाटो पु¥याउने यो जनालाई मुख्य गौ रवको यो जनाभित्र राखे का छौ ं । गत वर्ष ट्याक खुलिसके को थियो  । सुनपथ्री खो लादे खि सुनपथरी नाकासम्म पुग्ने बाटो लाई हामीले गत वर्ष ५० लाख छुट्याएका थियौ ं । ट्याक खुल्यो  । यता जंग्रहवादे खि खंग्रासम्म पुग्ने बाटो को पनि ट्रयाक खो ले का थियौ ं । गत वर्ष हामी आफै गाडी लिएर खांग्रा नाकासम्म पुगे का थियौ ं । त्यस पछाडि नाकादे खि नाका जो ड्न आवश्यक थियो  । त्यसकारणले राजपुर गाउ“पालिकाको पूर्वी सिमाना गुरुङ नाकादे खि पश्चिम सिमाना भौ वासम्म बाटो खो ल्ने हाम्रो यो जना थियो  । त्यसमा चाहि गत वर्ष सीमा विकास कार्यक्रमबाट १९ लाख ७५ हजार र गाउपालिकाको ५० लाख गरे र गुरुङ नाकादे खी बरुवा नाकासम्म ११ किलो मिटर बढी ट्रयाक खो ले का छौ ं । त्यो बाटो मा कल्भर्टहरु, कजवेहरु, ठाउ–ठाउमा ह्युमपाइपहरु राखिएको छ ।
यो वर्ष पनि गाउपालिकाले २५ लाख बिनियो जन गरे र त्यहाबाट खंग्रा नाकासम्म बाटो पु¥याउने लक्ष छ । हाम्रो मुख्य उद्दे श्य के हो भने नाकालाई जो ड्ने नै हो । अर्काे कुरा नाकामा विकास पु¥याउने हाम्रो पहिलो लक्ष छ । खासगरी नाकामा दे उखुरीको उत्पादन पु¥याएर नाकावासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ । नाकाका बासिन्दा भारतमा भर पर्नु भन्दा पनि दे उखुरीमा भर परुन । ने पालमा भर परुन् भन्ने हिसावले उनीहरुको सम्पर्क दे उखुरीमै बढाउने र गाउ“पालिकामा सम्पर्क बढाउने भन्ने हाम्रो सो च हो  । उनीहरुलाई आवतजावत गर्न, बिरामी भएको बे ला भारत जानुपर्छ ।
विकास निर्माणको काम गर्नुपरे मा भारतबाट सामान ल्याउनुपर्छ । एसएसबीले ल्याउन नदिने , निकै कठिनाइ हुने भएको हुनाले बाटो खुल्यो भने त्यहा“ विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने विकास सामग्रीहरु भए, विरामी भएको बे लामा एम्बुले न्स पुग्न सक्ने , सुत्के रीहरुलाई एम्बुले न्समार्फत लिएर आउने  ।
जस्तो हाम्ले के गरे का छौ ं भने सुत्के री महिलाहरुलाई अस्पताल पु¥याउन एम्बुले न्स शुल्क निःशुल्क गरे का छौ ं । गाउपालिकाको स्वास्थ्य चौ कीमा आएर उनीहरुलाई वुटबल, ने पालगञ्ज पठाउनुप¥यो भने पनि त्यसको खर्च दिने , भाडा दिने भने र व्यवस्था गरे का छौ ं । त्यसकारण त्यो सुविधा त नाकासम्म पुग्नुप¥यो नि । यता पट्टि मात्रै सुविधा दिएर त भएन । त्यसकरणले बाटो त्यहा पुग्यो भने त्यहा“को हरे क क्षे त्रमा यहाको अन्नपात त्यहा पुग्ने , त्यहाको उत्पादन यता आउने  । मो टरगाडीहरु पुग्ने , आवतजावत गर्न सजिलो हुने  । एम्बुले न्सहरु पुग्ने  । बिरामीहरु ल्याउन लग्न सजिलो हो स् भने र पहिलो प्राथमिकता नाकास् तरीय सडकलाई दिएका छौ ं ।
अरु नमूना काम के छन् ?
गत वर्ष स् वास् थ्यतर्फ कर्म हे ल्थ भन्ने एउटा संस्थासग सहकार्य गरे र एमबिबिएस डाक्टर राखे र से वा उपलब्ध गराएका छौ ं । एमबिबिएस डाक्टरको से वा उपलब्ध भइसके पछि भिडियो एक्सरे से वा, ल्याव से वाको व्यवस् था गरे का छौ ं । ने पाल सरकारले दिने निःशुल्क ३५÷३६ थरिका औ षधि थिए । त्यसलाई गाउपालिकाको अनुदानबाट ७७ थरिका पु¥याएका छौ ं । यो वर्ष पनि हामीले के ग¥यौ ं भने त्यही कर्म हे ल्थको सहयो गमा गाउपालिकाले एउटा एमबिबिएस डाक्टर थप गरे को छ । दुईजना डाक्टर अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ । बे लास् िथत प्रतापुरमा पनि स्वास्थ्य चौ की छ । राजपुरमा मात्रै से वा हुदा पूर्वतिरका जनतालाई गाह्रो हुने , स्वास्थ्य से वा नपाउने , गढवा, लमहीतिर जानुपर्ने भएको हुनाले दुईतिरै से वा दिन सजिलो हो स् भने र दुईजना एमबिबिएस डाक्टरको व्यवस्था गरे का छौ ं । र, अहिले भर्खरै दशजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भने र राखे का छौ ं । घर–घरमा गएर बिरामीको रे कर्ड लिने , बिरामीको अवस्था बुझने , त्यसरी डाटा लिनलाई महिला स्वास्थ्य स्वयंसे वक पनि भर्ना गरे का छौ ं ।
शिक्षण पे शामा संलग्न व्यक्ति । पछि निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि हुनुभयो ? पहिले र अहिले को खटनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
पहिले दे खि म राजनीतिमा चासो राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले गाउ“घरका समस् याबारे सधै बुझिराख्थें  । गाउघरका मानिसहरुले शिक्षक भने पछि जनप्रतिनिधिकै रुपमा हे र्ने चलन थियो  । गाउ“को अगुवाको रुपमा शिक्षकलाई लिने गर्थे  । त्यसकारण मलाई पहिले दे खि नै जनताको काम गर्न आफ्नो स् तरबाट सहयो ग गर्दै आए“ । शिक्षण पे शाको ड्यूटी बाहे कको समयमा जनताको काम गरिरहे को हुनाले त्यति अफ्ठे रो त लागे न । तर पनि पहिले को व्यवस् था र अहिले को व्यवस् थामा हे र्दा खटाइ चाहि अलि बढी नै छ ।
अवसर के दे ख्नुहुन्छ ?
आफ्नो ठाउको स् थानीयस्तरको विकास गर्ने अवसर हो  । आफ्नो अवधिभरमा राजपुर गाउपालिकालाई बाटो घाटो को हिसाबले , स् वास् थ्यको हिसाबले , शिक्षाको हिसाबले , कृषिको हिसाबले अलिकति सम्पन्न र अहिले को तुलनामा के ही राम्रो जनताले अनुभूति गर्न सक्ने से वा प्राप्त गर्न सक्ने अवस् थामा पु¥याउने लक्ष छ । त्यो नै मे रो लागि अवसर हो  । पाच वर्षभित्रमा मै ले भने का क्षे त्रमा के ही उपलब्धि हासिल गर्न सकियो भने भो लिको दिनमा रहे पनि नरहे पनि म पछिल्ला दिनमा जनप्रतिनिधि रहु“ला या नरहु“ला तर मान्छे हरु ले सम्झिने
काम गर्ने तर्फ मे रो ध्यान छ । फलानो ने तृत्वमा हुने बे लामा यति कामहरु भए, यति कामका शुरुवातहरु भए भन्ने किसिमका सम्झना रही राख्यो भने मे रो लागि उपलब्धि त्यही हुन्छ ।
काम गर्दा कस् ता–कस्ता चुनौ तीहरु भो ग्नुप¥यो ?
नया संरचना भएको हुनाले काम गर्न चुनौ ती भयो नै  । शुरुवात गर्दा धे रै चुनौ तीहरु थिए । जनताको असीमित चाहना । त्यस पछाडि लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिबिहीनताको अवस् था । पहिलो पहिलो अनुभव । संरचना पनि नया । भौ तिक पूर्वाधारको पनि अभाव । कर्मचारी अभाव भएको  । अनि विकटता त्यत्तिकै  । यिनमा कानुन पनि नभएको  ।
त्यस्तो अवस्थामा शुरुवात गर्न निकै कठिनाइ भो ग्नुप¥यो  । अन्यौ लता त बीच–बीचमा परिरहन्थ्यो  । तर चारै तिरबाट बुझ्दा सरकारले दिएको एउटा नमूना कानुनमा टे के र, संविधानमा टे के र अब हामीले के –के गर्न सक्छौ ं त भने र कार्यविधिहरु बनाउदै ऐ नहरु पास गर्दै , नियमहरु बनाउदै , कार्यविधि, निर्दे शन, के न्द्रको परिपत्रको आधार माने र नै अघि बढ्यौ ं । अघिल्लो वर्षको अनुभवलाई आधार माने र हामी अघि बढे का छौ ं ।
अन्तमा, केही छुटे का कुरा छन् कि ?
यहासम्म आएर राजपुर गाउपालिकाले गरे का कामहरुलाई मिडियासम्म पु¥याउन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको मा तपाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मे रो अनुरो ध के छ भने सरकारको नारा समृद्ध ने पाल सुखी ने पाली भन्ने छ । मै ले पनि ‘समृद्ध राजपुर, सुखी राजपुरे ’ नारा तय गरे को थिए । यो नारामा सबै लाई साथ दिन, अघि बढ्न सबै स“ग अनुरो ध गर्छु ।
Previous: पानीमा डुबेर बालिकाको मृत्यु
Next: पद्मोदय पब्लिकद्वारा राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम